Socdaalkii Cagaaraa iyo Wadada Galaadi - Cakaara News
Socdaalkii Cagaaraa iyo Wadada Galaadi
Galaadi(CN) Talaado, December 1, 2015, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftiguu hogaaminayay ayaa saaka ka ambababxay Kalub iyagoo wadada laamiga ah uga dagay dhanka wadada ciida cas ee gobolka Doolo oo gaar ahaan kuwajahan degmada Galaadi.
Hadaba, intii safarkan ciida cas ee socdaalkii horumarinta cagaaran lagu jiray ayaa waxay madaxwaynaha iyo waftigiisu sii marayeen qabaleeyo taariikhda deegaanka magac wayn kuleh oo ay kamid ahaayeen: caleen, bali-wanaag, neef-kuceliye, miir-khaliifo, cagaarwayne, miir-faralay, isgoyska IWM.
Shacabka qabaleeyadan ayaa dhamaantood iyagoo caleemo qoyan ruxaya madaxwaynaha iyo wafftigiisa kaga horimanayay wadooyinka meesha uu madaxwaynuhu goob kasta u dagayay halkaana kalasoo lugaynayay ilaa lagaadho qabalaha ay kasoo baxeen. Kadibna, kulamo wadatashi iyo xog waraysi isugu jira laqaadanayay dhamaan shacabwaynaha qabaleeyada uu marayay.
Waxaan meesha kamadhnayn in hooyooyinka iyo caruurta danyarta ah ee dagan qabaleeyadaas uu madaxwaynuhu u qaybinayay sonkor, rinji, buskud iyo timir.
Wax lasii socdaba waxaa xili kubeegan maqribkii lagaadhay magaalada galaadi oo shacabku 1km kor ugasoo baxeen wadadana buux-dhaafiyeen soo dhawayn awgeed iyagoo ay wajiyadooda iyo dareenkoodaba kamuuqato farxad aad u wayn.
Ugudanbayna, madaxwaynaha iyo waftiga oo socdaal aad u dheer soo galay ayaa udheelmanaya magaalada galaadi.
Waxaana xusid mudan in kooxaha fanka iyo suugaantu ay bandhig faneed gilgili doona madasha madadaalada u qabanayaan shacabwaynaha degmada galaadi.